Danjire Mareykanka U Fadhi Jiray Addis Ababa Oo Fursad Alshabaab U Arka Ku Biirida Itoobiya Ee AMISOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Washington – Mareeg.com: Danjirihii hore ee Mareykanka u fadhiyay Itoobiya, David Shinn ayaa qaba in ku biiritaanka ciidamada Itoobiya ee howlgalka AMISOM uu fursad u yahay xarakada Alshabaab.
David Shinn ayaa tallaabada ciidamada Itoobiya kula biireen AMISOM ku tilmaamay mid khalad ah, islamarkaana keeni doonta in shacabka Soomaaliyeed taageero siiyaan Alshabaab, sida uu yiri.
Danjire Shinn oo hadda ah macallin wax ka dhiga machadka daraasaadka caalamiga ah ee jaanacadda George Washington ee dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in ku biiritaanka Itoobiya ee AMISOM uu sii xoojineyso faragelinta ay ku heysay arrimaha Soomaaliya.
“Ciidamada Itoobiya markii horeba Soomaaliya dantooda ayay ugu jireen Soomaaliya, iyagoo aan u daneyneyn dowladda Soomaaliya, balse qorshaha ay ugu biirtay AMISOM waxaan u maleynayaa inay xoojin u tahay faragelintii ciidan ee ay Itoobiya horayba ugu haysay Soomaaliya,” ayuu yiri danjire Shinn oo wareysi siiyey VOA.
Wuxuu sheegay David Shinn in ay goortey doonaan k agudbaan xadka Soomaaliya, iyagoo ku marmarsyoonaya inay la dagaalamayaan Al-shabaab, islamarkaana beegsanaya cid walba oo ay u arkaan cadowgooda.
Danjire Shinn ayaa sheegay in go’aankan ay Itoobiya ay ugu mid noqotay AMISOM uu keeni karo inay Al-shabaab qorato xoogag cusub uu ka caawiya dagaallada ay ka wadaana gudaha Soomaaliya, kuwaasoo u careysan Itoobiya.
Afhayeen u hadlay howlgalka Amisom ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya dadka Soomaaliyeed ula dhaqmni doonaan sida ciidamada kale ee AMISOM ee ka kala socda Uganda, Burundi, iyo Jabuuti.